Sunday September 01, 2019 - 13:15:29 in Wararka by Super Admin
Shan sanadood oo xiriir ah ayaa kasoo wareegtay markii dowladda Mareykanka ay duqeyn dhanka cirka ah ku dishay Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr amiirkii hore ee Xarakada Al Shabaab.
1,September 2014 ayaa duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ka fuliyeen duleedka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku dileen Sheekh Abuu Zubeyr oo Hoggaaminayay Xarakada Al Shabaab ee ka dagaallanta Soomaaliya.
6 Maalmood kadib istish-haadkii Sheekh Abuu Zubeyr ayay golaha shuuradaha xarakada waxay amiirka cusub ee xarakada u magacaabeen Sheekh Abuu Cubeyda .
Dowladda Mareykanka iyo hoggaamiyaasha maamullada dabadhilifyada Soomaalida ayaa u dabaal degay dilka Sheekh Abuu Zubeyr iyagoo u arkayay mid wiiqaysay awoodda xarakada balse taasi ma dhicin oo xarrakada ayaa sii xoogaysatay.
Howlgalladii ugu xooganaa Abid oo ay la kulmaan ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa ka dhacay gobollo dhaca Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa jiha wareer u horseeday shaxdii dagaalka ee udegsaneed shisheeyaha waxayna kusoo koobmeen in ay godad ka qotaan saldhigyad ay uga suganyihiin magaalooyinka qaar.
Sheekh Abuu Cubeyda oo ah Ninka bedelay Abuu Zubeyr ayaa lasoo baxay hoggaan wanaag,ad adeyg iyo howlkarnimo waxayna cadowgiisu qireen in uu halgan adag ka wado geeska qaaradda Afrika,
Shan sano kadib Istish-haadkii Sheekh Abuu Zubeyr Al Shabaab awoodoodu waxay kusii baahaysaa gobollada kala duwan ee wadanka Soomaaliya iyo gudaha wadanka Kenya waxayna fayllaha ka go'ynayaan ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dabadhilifyada ah.
Halkan ka akhri magacaabista amiirka cusub PDF
Dhammaan ciidamada shisheeye waxay gabeen marxaladdii weerarka waxayna kusoo aruureen difaac arrinkaas waxaa usabab ah dhabar adeyga iyo dhiiranaanta dagaalyahanada Al Shabaab ee dagaalka ku dhufo oo ka dhaqaaq sidaas waxaa qiraya khubarada melleteriga.
Sheekh Axmed Cumar Abuu Cubeydda ayaa markii uu hoggaanka u qabtay xarakada wuxuu agaasimay howlgallo lagu dilay kumanaan askari kuwaasi oo sababay in ciidamada shisheeye ay isaga baxaan magaalooyin iyo deegaanno hor leh.
Weerarada lagu naafeeyay ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka dhacay kadib istish-haadkii Sh.Abuu Zubeyr ayaa kala ah:-
1-Weerarkii Leego oo dhacay bishii June 2015 waxaa lagu dilay in kabadan 70 Askari oo katirsan ciidanka Burundi.
2-Weerarkii deegaanka Jameeco oo dhacay bishii June 2015 waxaa lagu dilay 60 Askari Itoobiyaan ah.
3-Weerarkii Ceel Cadde oo dhacay bishii Janaayo 2016 waxaa lagu dilay 200 Askari Kenyaan ah
4-Weerarkii Janaale oo dhacay Bishii September 2015 waxaa lagu dilay 55 Askari Yugaandheys ah.
5- weerarkii Kulbiyoow oo ciidanka Kenya looga dilay 57 askari.
6-weerarkii Golweyn oo 51 askari looga dilay ciidanka Uganda
7-weerarkii Halgan oo ciidanka Itoobiya looga dilay ugu yaraan 60 askari.
8-Weerarkii Balcad iyo duleedkeeda oo lagu dilay 23 askari Burundeys ah
sidoo kale Al Shabaab ayaa gudaha wadanka Kenya ka fulisay weeraro dad badan lagu laayay waxaana ugu weynaa Weerarkii jaamacadda gaarisa oo lagu dilay 200 qof Kenyaan ah
Sidoo kale ciidamada Al Shabaab ayaa duullaan melleteri oo wax badan ka bedelay hanaanka dagaalka Soomaaliya ka fuliyay deegaanno ay kamid yihiin Garasweyne,Halgan iyo deegaanno kale oo katirsan dalka Soomaaliya.
Khasaarihii ugu xooganaa ayaa soo duulayaasha AMISOM kasoo gaaray dagaalka Soomaaliya tan iyo markii uu shahiiday Sheekh Abuu Zubeyr taasi oo farriin cad u ah shisheeyaha dalka kusoo duulay.
Dardar gelinta weerarada naf-hurnimo ee lagusoo afjarayo saldhigyada ciidamada AMISOM waxay sababeen in ciidamada ka socda Ururka Midowga Afrika ay ka gabaan kaalintii duullaanka ayna ku aruuraan difaac taasi oo fursad usiisay ciidanka Xarakada in ay wiiqaan maleeshiyaadka Dowladda Federaalka oo markii hore carratuur u ahaa shisheeyaha.
Hoos Ka Daawo sawirrada qaar kamid ah weeraradii Al shabaab ay cagta ku mariyeen saldhigyada AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka.
R/wasaare ku xigeenkii hore ee dowladda Federaalka oo Hargeysa iska dhiibay.
Dowladda Suudaan oo caadiyaysay cilaaqadka kala dhaxeeya Yahuudda.